Ebe nchekwa ihe na-ewu ewu • Ọmụma ihe ịga nke ọma
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4002 Echiche
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti5764 Echiche
Ọgụgụ ngwa ngwa Nnweta na-adigide na nlekọta ahụike ịmụ nwa na East Africa
Alex OmariSarah KosgeiDiana Mukami Julaị 1, 2020
Ndị ntorobịa na ndị nọ n'afọ iri na ụma kwesịrị nlebara anya pụrụ iche. Edemede a na-akọwapụta ọrụ dị mkpa nke ndị na-eme mkpebi na ndị ndụmọdụ teknụzụ na ịkwalite ohere ịnweta ọrụ RH site n'aka ndị ntorobịa n'oge COVID-19.
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4797 Echiche
N'ime omimi COVID-19: Kedu ka ụwa ga-adị ka ọnwa itoolu gachara?
COVID-19 ebulila ndụ anyị na, ikekwe karịa nke ukwuu, ọtụtụ n'ime echiche anyị banyere mmetụta ya na ụwa. Ndị ọkachamara na atụmatụ ezinaụlọ na-enwe nchegbu miri emi na nkwụsịtụ n'agbụ a na-enye ọgwụ mgbochi nwere ike ịkpata ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti3363 Echiche
Data Kedu ihe nwere ike maka ụlọ ahịa ọgwụ iji meziwanye ohere ịnweta injectables?
Injectable bụ usoro atụmatụ ezinaụlọ kacha ewu ewu na Uganda mana, ruo n'oge na-adịbeghị anya, Ọ bụ naanị ndị ọrụ ahụike obodo na ụlọ ọrụ ahụike na ụlọ ọgwụ nyere. Na ntule ndịiche, nke obodo 10,000 ụlọ ahịa ọgwụ, nke na-enye ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4060 Echiche
Ọgụgụ ngwa ngwa Ndụmọdụ na-akwado ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ nwere ihe ọmụma, Nkà, na Nkwado iji merie ihe ịma aka
Suzanne FischerKate Plourde Mee 27, 2020
Gburugburu ụwa, ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ na-eche ọtụtụ ihe ịma aka maka ahụike na ọdịmma ha ihu. Nnyocha na mmetụta nke nduzi na-egosi mkpa ọ dị ezigbo ihe nlereanya na usoro nkwado mmadụ maka imeziwanye ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti4642 Echiche
N'ime omimi Ànyị Na-ekwesị Nzube Anyị Nye Ndị Na-eto Eto?
Tamar Abrams Mee 21, 2020
N'October 2018, karịrị 100 òtù dị iche iche bịanyere aka na Nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ na ntinye aka n'oge ntorobịa na ndị ntorobịa bara uru (MAYE). Ajụjụ a ka dị: Kedu ihe bụ mmetụta MAYE? Anyị jụrụ ole na ole na-eto eto ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti3631 Echiche
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti17118 Echiche